Ankizy sy lehibe 700 isa manana olana amin’ny fikarakarana taratasim-panjakana, fidirana an-tsekoly noho ny tsy fananana kopia mari-pahaterahana. Ao anatin’ny iraka voalohany ataon’ny fikambanana Rotary Club Antananarivo Doyen ny fanamorana ny fahazoan’ireo ankizy sy olon-dehibe tsy mbola manana kopia mari-pahaterahana. Niroso tamin’ny fizarana ny kopia an’ireo “olom-pirenena matoatoa” tao amin’ny kaominina Ambohidrapeto sy ny kaominina Andranonahoatra ny fikambanana ny 18 janoary 2019. Nisitraka ny zony amin’ny maha olom-pirenena azy ireo “olom-pirenena matoatoa” ankehitriny noho ny fiarahamiasa teo amin’ny ministeran’ny fitsarana, ny distrika an’Atsimondrano ary ny masoivoho an’i Alemana.
Asa maharitra tanterahin’ny fikambanana tahaka an’i Rotary Club Antananarivo doyen ny fanomezana kopia faobe. Nanomboka ny taona 2016 no mankaty dia kopia 6000 isa no nozaraina teto amin’ny kaominina an’Antananarivo Renivohitra, 2000 isa tany amin’ny distrika an’Avaradrano. “Manana fanantenana hizara kopia mari-pahaterahana 1000 isa ho an’ny distrika an’Atsimondrano izahay”, hoy ny filoha ny Rotary club Antananarivo doyen, Hervé Patrick Ratsizafy. Ankoatra izany, nampatsiahivin’ny filohan’ny fikambanana fa sehatra enina no hiasan’ny Rotary Club Antananarivo doyen toy ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza, ny rano sy ny fahadiovana, ny fisorohana ny aretina, ny fanabeazana, ny fampandrosoana ara-ekonomika ary ny filaminana sy ny famahana ny olana ara-tsosialy. Amin’ny alalan’io voalaza farany io dia ho tontosaina tsy ho ela ny lanonana “entente mondiale” izay hampivondrona olona malaza, manam-pahefana eto an-toerana sy diplomatika. Fomba iray hampiroboroboana ny filaminana eo amin’ny vahoaka ity lanonana ity.
‹ Tavoahangy plastika: Mahavita foto-drafitr’asa natao hialàna voly	› RDJ MOZIKA : Choisir votre artiste préféré de l’année 2018